Izindaba - Amathiphu wokulungisa nokulungisa ama-Butterfly Valve
Amathiphu wokulungisa nokulungisa ama-Butterfly Valve
A uvemvane valve uhlobo lwedivayisi elawula ukugeleza, okubandakanya idiski ejikelezayo yokusebenzisa uketshezi olugeleza kule nqubo. Ngokuma okumi mpo kweveluvane yovemvane, kune-disc esuselwa ensimbi esebenzisa ubuchwepheshe bokuvala ketshezi olugelezayo. Ukusebenza kokuvalwa kwale valve kufana ncamashi nokusebenza kokuvala kwe-valve yebhola.
Uma kuqhathaniswa ne-valve yebhola le-float, le valve inezinzuzo ezilandelayo:
Engasindi; ngakho-ke ayidingi ukwesekwa okuningi.
Uma kuqhathaniswa namanye ama-valve afanayo anemiklamo ehlukene, izindleko zayo ziphansi.
Ivelufa levemvane liyi-valve enokwethenjelwa futhi esondelana kabili, esetshenziswa kakhulu ekudleni, ekwakheni imikhumbi nakwezinye izimboni. Uma kuqhathaniswa namanye ama-valve, ukufakwa kwamaveluvemvane kuyindlela engabizi kakhulu. Ngokuvala i-disc, ivalvevemvane nayo ingadlala indima ekuqondiseni ukugeleza nokuvala uketshezi / igesi.
Ungawalungisa kanjani futhi uwagcine kanjani amaphayiphu evemvane emapayipini ahlukile?
Amathiphu alandelayo wokunakekelwa kwevemvane levemvane unganikezwa ukuze uwasebenzise:
Ama-valve e-Butterfly adinga ukugcinwa nokulungiswa okujwayelekile ngemuva kokusebenza ezindaweni ezahlukahlukene zokusebenza isikhathi esithile. Ukugcinwa okujwayelekile kungahlukaniswa kube ukulungiswa okuncane, ukulungiswa okuphakathi, nokulungiswa okunzima.
Ukuhlaziywa okuthile kuncike ezimweni zemvelo zepayipi. Ngoba izimboni ezahlukahlukene zidinga izinqubo ezehlukene zokulungisa nokulungisa, ngokwesibonelo, kulondolozo lwamapayipi lwamabhizinisi kaphethiloli, ingcindezi yepayipi iyadingeka ukuthi ibe ngaphansi kune-PN16MPa, futhi izinga lokushisa eliphakathi liphansi kuno-550 ° C. Izimo ezahlukahlukene zokulungisa ziyadingeka kwimidiya ehlukahlukene yokuhambisa amapayipi ngokomzimba nangamakhemikhali.
Inqubo yokulungisa encane yamaphayiphu ovemvane wepayipi ahlukahlukene, kufaka phakathi ukuhlanza imibhobho nezinkomishi zikawoyela, ukufaka ama-o-ring, ukuhlanza imicu kanye neziqu zama-valve, ukususa imfucumfucu ku-valve, ukuqinisa izikulufu nokulungisa amasondo wesandla. Zonke lezi zingasetshenziswa njengesondlo esihleliwe. Ukulungiswa okulingene: kufaka phakathi izinto ezincane zokulungisa, ukufaka ezinye izingxenye ezihlanzekile, ukukhanda umzimba we-valve, ukumisa izihlabathi, ukuqondiswa kwe-valve stem, njll. Lezi zinto zingasetshenziselwa ukulungisa kabusha efektri. Ukulungiswa okunzima: Kufakiwe kuphrojekthi yokulungisa phakathi nendawo, ukushintshwa kweziqu zama-valve, ukulungiswa kwamabakaki, ukushintshwa kweziphethu nezimpawu. Lapho kudingeka lokhu, ivalvevemvane ilimala kakhulu.
Ukuze uvimbele ukugqwala nokugcoba uwoyela, amaveluvemvane kufanele agcinwe kahle.
Phezulu kwe-valve, kunendawo yokufaka uwoyela wokuthambisa. Lokhu kungenzeka kungabonakali lapho kufika i-valve. Qiniseka ukuthi ugcoba amafutha entanyeni ye-valve ngezikhathi ezithile kuze kuphume igrisi eyeqile.
Ku-gearbox, ungasebenzisa i-lithium-based grease ukunakekelwa.
Ungasebenzisa noma yimuphi umkhiqizo / i-lubricant esekwe ku-silicon ukuhlanza kalula zonke izingxenye ze-valve.
Uma ungayisebenzisi njalo, sicela uzame ukujikeleza noma ukuhamba ngebhayisikili i-valve yebhotela kanye ngenyanga.
Singa abahlinzeki bevemvane abahlinzeka. Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi uma unentshisekelo kumikhiqizo yethu.